Dredge sooks Factory, Suppliers - China Dredge sooks Manufacturers
Ckgbọ mmiri Cago Oil sooks
Mmiri sere n'elu sooks
Margbọ mmiri mmanụ okpuru mmiri
Industrial Fluid Rubber sooks
Rubber Lay Ewepụghị sooks
Mainline Submarine sooks Wit ...
Mainline sere n'elu sooks
Akọrọ cimenti sooks
Ihapu Dredge sooks
Na-ese n'elu mmiri Dredge sooks
Na-ese n'elu mmiri dredge sooks ZEBUNG Rubber Dredging Hoses bụ nzube e wuru maka mkpa pụrụ iche nke ndị ahịa anyị. Anyị nọ n'ọnọdụ iji wulite nha nha sitere na 100 mm ID na ID 2200 mm. Ndị na-emepụta anyị ga-ahọrọ ihe ndị kwesịrị ekwesị site n'ọtụtụ ngwaahịa dị anyị iji nwee ike ịchọta ihe ndị chọrọ maka ọrụ na ihe ndị ahịa anyị rịọrọ ya bụ maka iyi nkwụsi ike, ogo nrụgide, ike mgbagha, ikike ikike na mpaghara ndị ọzọ. Ke ofụri ofụri ZE ...
Igbapu dredge sooks ZEBUNG Rubber Dredging Hoses bụ ebumnuche wuru maka ihe ndị pụrụ iche ndị ahịa anyị chọrọ. Anyị nọ n'ọnọdụ iji wulite nha nha sitere na 100 mm ID na ID 2200 mm. Ndị na-emepụta anyị ga-ahọrọ ihe ndị kwesịrị ekwesị site n'ọtụtụ ngwaahịa dị anyị iji nwee ike ịchọta ihe ndị chọrọ maka ọrụ na ihe ndị ahịa anyị rịọrọ ya bụ maka iyi nkwụsi ike, ogo nrụgide, ike mgbagha, ikike ikike na mpaghara ndị ọzọ. Na izugbe ndị Z ...
Slurry mmiri sooks
A na-ewu ụlọ ọrụ slurry sose ZEBUNG Rubber Dredging Hoses maka mkpa pụrụ iche nke ndị ahịa anyị. Anyị nọ n'ọnọdụ iji wulite nha nha sitere na 100 mm ID na ID 2200 mm. Ndị na-emepụta anyị ga-ahọrọ ihe ndị kwesịrị ekwesị site n'ọtụtụ ngwaahịa dị anyị iji nwee ike ịchọta ihe ndị chọrọ maka ọrụ na ihe ndị ahịa anyị rịọrọ ya bụ maka iyi nkwụsi ike, ogo nrụgide, ike mgbagha, ikike ikike na mpaghara ndị ọzọ. Na izugbe ZEB ...
Hebei Zebung roba technology co., Ltd.